UYILO LWETATOO ZECOCONUT EZINGAMA-40 ZAMADODA-IINGCINGA ZENKQANTOSI YEZIQHAMO ZETROPIKI - UHLOBO
Uyilo lweTatoo zeCoconut ezingama-40 zaMadoda-Iingcinga zeNkqantosi yeziqhamo zeTropiki
Iitattoo zecoconut ziba ngumkhwa wokuhlonela uThixo kwi-inki yenkcubeko yanamhlanje. Ezi zinto zibonakala zilula zilayishwa ngokubaluleka ezinokubonisa ubuntu bokwenyani bendoda kunye nezinto eziyenzileyo.
Uyilo lwesiqingatha semikhono ye tattoo yabasetyhini
Ukutyhila i-tropical mindset, akukho nto iya kwenza iqhinga ngokukhawuleza kunobugcisa bomzimba wekhokhonathi. Isikimu esibonakalayo esimangalisayo sinokuqhutywa ngeendlela ezahlukeneyo zobugcisa.
Iicoconuts azifane ziboniswe zodwa; Endaweni yoko, ziboniswa njengoko zinokufunyanwa kwindalo. Oku kuthetha ukuba izinto zendalo esingqongileyo zinokufakwa ngokukhawuleza ukwandisa imeko yesiqithi. Ukongezwa kweChic kubandakanya imithi yesundu, iilwandle kunye nokutshona kwelanga kolwandle.
Inki eninzi yekhokhonathi ihlakaniphile ngokwaneleyo ukuba ibonakalise ijusi kuyilo ngokunjalo. Ikhokhonathi evulekileyo evulekileyo ihlala iyabonakala, kwaye isikhumbuza ukunxanwa kukhumbuza izibonelelo zempilo ezingenamda ezinxulunyaniswa nesiyobisi. Ngokubanzi, olu hlobo lobugcisa lubotshelelwe ekugcineni indlela efanelekileyo yokuphila eyonwabisayo kwaye ingakhathali.
Iingcamango zenkcubeko nazo ziqhotyoshelwe kwiitatoos zecoconut, ngakumbi kummandla wamaHindu. Esi siphumo sinokunyuswa ngokubandakanywa okunentsingiselo kweSanskrit okanye ezinye izicatshulwa zokucamngca. Ngokwahlukileyo, ezinye iitatoo zecoconut zide zadityaniswa nentsingiselo ye-meta, ngakumbi kuba uninzi lweetattoos ze-coconut zisebenzisa ioyile yekhokhonathi ukugcina ukungcangcazela kwe-inki yazo. Le ndlela yokuzimela iyapakisha kwiimpawu ze-hipster charm.
Njengobungqina bokutsala okunqwenelekayo kweeTattoos zecoconut, siye saqulunqa iisampulu ezigqwesileyo ukukhanyisa umbono wakho kolu phawu lobugcisa lomzimba.
njengasentla ngaphezulu kwesimboli
izimvo zefanitshala zegumbi lokuhlala ngokusesikweni
Igumbi lokuhlala loyilo lodonga
eyona mipu ye tattoo yabaqalayo
iiTatoo ezilishumi eziphezulu zabafazi
Iimpawu zakhe kunye nezakhe
I-lotion efanelekileyo yokugcinwa kwe tattoo
Iwindow kunye neengcango zomnyango
Umdibaniso wombala wezitena kunye nelitye elingaphandle
indlu yokugcina ifama yefenitshala yegumbi lokuhlala